Odayaasha Muqdisho oo u hanjabay wasiir ka tirsan DF | Dalkaan.com
Home Warkii Odayaasha Muqdisho oo u hanjabay wasiir ka tirsan DF
Odayaasha Muqdisho oo u hanjabay wasiir ka tirsan DF
Muqdisho (dalkaan) – Qaar kamid ah Odayasha dhaqanka gobolka Banaadir oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa eedeymo u jeediyay Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya, Cabdullaahi Abuukar Xaaji (Cabdulaahi Carab).
Odayaasha ayaa uga digay musuq-maasuq ay sheegen in Wasiirka uu ku sameeyo deeqaha waxbarasho ee loogu talo galay ardeyda gobolka Banaadir, kuwaasi oo qaarkood lacag badan lagu iibiyo, halka kuwa kalena hab qabiil uu u siiyo, sida ay sheegen.
“Waxbarashadii shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir, ninka gacanta ku haya aad iyo aad ayuu nooga dhibaateyay waxbarashadii. Ilmihii manxooyinka ahaa ee loo helay waxay ku baxeen yaa qomii,” ayuu yiri Nabadoon Hilowle oo kamid ah Odayaasha la hadlay warbaahinta.
“Lacag ayuu ka rabaa (Ardeyda), wixii kalena reernimo ayuu ku qaadanayaa. Waxaa rabnaa in arrintaas si dhimir leh ay u fiirshaan Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadir.”
Sidoo kale waxay ku eedeyen in Wasiir Cabdullaahi Carab uu fara-gelin ku hayo xarumihii caafimaadka ee gobolka Banaadir, islamarkaana uu goobo danguud ahaa uu ka dhigay kuwa gaarka ah, sida ay sheegen.
“Odayasha dhaqanka waxay maanta iskugu yimaadeen waa dhibaato ka haysata caafimaadka, weliba goobaha caafimaadka qaarkood. Meel dan guud ah oo laga dhigtay Private kana qaalisan kuwii gaarka loo lahaa oo dadka badankooda ku geeriyoodaan.”
Ugu dambeyntiina waxay sheegen in si deg deg ah wax looga qabto ku tagri-falka awoodeed ee uu Wasiir Carab ku sameynayo goobaha danta guud ee gobolka Banaadir, islamarkaana dib loo fiirsho deeqaha waxbarasho ee uu musuq-maasuqayo, oo ay sheegen inuu ka sameeyo lacag badan.
Previous articleSouth Africa oo si kulul u beenisay warar laga faafiyey moos laga keenay Soomaaliya
Next articlePep Guardiola oo “ku qancay” Barcelona inay la soo saxiixan doonto Raheem Sterling haddii ay xiiseyneyso
Arrin ku cusub doorashada 2021 oo Farmaajo u gacan gelinaya xildhibaano badan
Maareeye oo jawaab kulul ka bixiyey hadalkii Cali Yare
Midowga Musharaxiinta mucaaradka oo qaadacay doorashada dalka ka socota
Saddex arrin oo jahwareer ku noqon doona damaca Siciid Deni ee Villa Somalia
Cabdiweli GAAS oo weerar culus ku qaaday Musharaxiinta
Ciidamada DF oo weerar ku qaaday duleedka Muqdisho iyo Saney Cabdulle...
dalkaan_2ujpzr - October 6, 2021 0
Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidanka xoogga dalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo culus oo lagu qaadaayey isbaarooyinka waxay ka bilaabeen deegaanada dhaca inta u...
Inter Milan 1-1 Juventus, P. Dybala oo ka Fujiyay Old Lady...
DF oo amar kasoo saartay dhul dowladeed oo Muqdisho ku yaal...
Maxay ku liidataa shan sano, kadib HirShabelle?
Wasiirka Amniga “Ma aqbali doonno hubka Sharci darrada ah ee lagu...
Dhaq-dhaqaaqyo dagaal oo ka billowday GURICEEL iyo wararkii ugu dambeeyey
Wararka Suuqa Maanta: Manchester United oo Waqtiga u qabatay Paul Pogba,...
Wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda dagaal ee Kaaraan iyo Taliye war...
dalkaan_2ujpzr - October 14, 2021 0